Barcelona oo aan wali la saxiixan Koeman + Sabab Yaab Leh - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Barcelona oo aan wali la saxiixan Koeman + Sabab Yaab Leh
Ronald Koeman ayaa laga hor istaagay inuu fariisto kursiga keydka Barcelona ilaa laga xaliyo muranka Quique Setien.
Barcelona ayaa wajaheysa xaalad qariib ah oo Ronald Koeman aan loo ogolaan doonin inuu fariisto boosaska tababarayasha kulamada La Liga sababo la xiriira khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo tababarihiisii ​​hore Quique Setien, sida ay wararku sheegayaan.
Ka dib ceebtii Champions League oo ay kala kulantay Bayern Munich, kooxda reer Catalan ayaa si dhaqso ah u bedeshay Setien waxayna keensatay tababarihii hore ee Netherlands Koeman si uu badal ugu noqdo.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay idaacadda Isbaanishka ah ee Cadena Cope, Barca weli wax heshiis ah kama gaarin xaalka Setien oo ku saabsan bixitaankiisa taasoo la micno ah in La Liga aysan weli ka shaqeynin ceyrintiisa.
Tababaraha Isbaanishka ayaa dalbanaya in Barca ay siiso mushaharkiisa sanadka ka harsan qandaraaskiisa, laakiin madaxda Camp Nou ayaa rajeynaya inay ka wada hadlaan mushaharkaas.
Ilaa heshiis laga gaaro arinkaan, Barca ma awoodi doonto inay diiwaangeliso Koeman – taasoo la micno ah inaan loo oggolaan doonin inuu fadhiisto kursiga keydka wixii kulan rasmi ah.
Arimaha dhaqaalaha ee Barca ayaa sifiican loo shaaciyey, iyadoo kooxda ay ku dhibtooneyso inay sameyso saxiixyo cusub xagaagan, waxaana xaaladooda ay tahay mid gaartay heerkii ugu xumaa.
Naadiga ayaa dhowr jeer ku bixyay dhaqaalo aad u fara badan tababaryaal ay ceyroyeen, iyadoo horeyba u bixisay qandaraaska Ernesto Valverde, kaasoo shaqada laga ceyriyay bishii Diseembar,
Setien iyo Barcelona ayaa ilaa iyo hada khilaaf xoogan ayaa u dhaxeeya, iyadoo tababaraha uu heysto boos adag isla markaana uu si buuxda uga warqabo in kooxdiisii hore ay heysato isbuuc kaliya si ay ku xalliso xaalada.
Barcelona ayaa la ciyaari doonta Villarreal Axada 27 September kulankooda ugu horeeya ee xilli ciyaareedka cusub ee La Liga, sida ay haatan wax u socdaan, Koeman ayaa ku qasbanaan doona in uu meel fog ka daawado kulankaas.
Barca waxa ay leedahay ciyaar saaxiibtinimo oo ay ku wajahyaan Elche ka dib markii ay soo bandhigtay qaab ciyaareed wanaagsan kulankii Girona ee habeenkii xalay, iyadoo Philippe Coutinho uu furay gooldhalinta, Lionel Messi ayaana laba kale raacsaday.
Dhinaca kale Luis Suarez ayaa loo soo bandhigay rajo cusub oo ah inuu wali mustaqbal ku yeelan karo Barcelona ka dib markii arrimaha baasaboorka ee talyaaniga ku adkeysay inuu u wareegayo Juventus.
Weeraryahankii hore ee Liverpool Suarez ayaa loo sheegay inuu dheeri ku yahay shuruudaha tababaraha cusub ee Barca Ronald Koeman.
Laakiin sheekooyinkii ugu dambeeyay ee Koeman ayaa tilmamaya in Suarez rajo wanaagsan qabo, iyadoo tababaraha Blaugranas uu sheegay in weeraryahanka aan la qasbi doonin haddii uu sii joogo kooxda reer Catalan.
Previous articleArsenal oo saxiixii saddexaad ku dhawaaqeysa
Next articleAKHRISO: War murtiyeed Heshiis laga gaaray Arrimaha doorashooyinka
Barcelona Oo U Dhaqaaqaysa Paul Pogba Oo Qirtay Jacaylkiisa Real Madrid & Sababta Ay Sida Fudud Ugu Heli Karaan